Nooca birta ee ringimigan caanka ah ee Marimba iPhone | Wararka IPhone
Nooca birta ee loo yaqaan 'iPhone ringtone Marimba'
Qolka Ignatius | | iPhone, Waqtiyada firaaqada
Sanadihii la soo dhaafay, shirkad kastaa waxay qaadataa cod ay maamusho si ay uga dhigto mid aan shaki ku jirin wajiga tartanka. Xaqiiqdii midka aad sida aadka ah u xasuusato, haddii aad dhowr sano jir tahay, waa Nokia-ga caadiga ah, codkaas oo ku saleysan laxan uu sameeyay laxamiiste Isbaanish ah Laakiin sidoo kale waxaad xusuusnaan doontaa codka nacaybka leh ee Sony Ericsson u adeegsado aaladooda oo dhan ama shimbirtaa yar ee ka dhawaajisay Samsung si joogto ah markii aad saf ugu jirtay dukaanka wax laga iibsado ama maktabada markasta oo aad fariin ka hesho WhatsApp ama codsi kasta oo fariin deg deg ah ah.
Marimba waa mid ka mid ah codadka ugu dheer ee socda ee iPhone-ka iyo wuxuu noqday mid kamid ah wakiilada ugu caansan shirkadda, maaddaama ay tahay codka ka imanaya waddanka markii aad bilowdo qalabka. Sida astaamaha aan kor ku soo sheegay, markaad wadada marayso ama aad dhagaysanayso codkan telefishanka, waxaad u badan tahay inaad fiiriso iPhone-kaaga haddii ay dhacdo inuu yahay kan dhawaaqaya, maxaa yeelay waad ogtahay inay tahay iPhone.
Codkan asalka ah wuxuu ka kooban yahay xylophone-ka Afrikaanka ah, laakiin in ka badan 9 sano ka dib isticmaalkiisa, Apple wuxuu cusbooneysiin karaa codka, sida Nokia ay yeellan jirtay maalintiisa, si uu uga dhigo mid ka duwan sidii hore. Halka Apple ay ka fikireyso gitaarka ToxicEternity waxay abuurtay nooc bir ah oo ah midka ugu caansan ee loo yaqaan 'Marimba tone on iPhone'. Xaqiiqdii qaar ka mid ah akhristayaashayada iyo tifaftire kale (Mr. Aparicio) ayaa soo dejisan doona oo ku dari doona codadka iPhone-kooda si ay ugu raaxaystaan ​​nuqulkan cusub ee marimba. Oo ha ii sheegin Pablo inaadan is aqoon doonin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Nooca birta ee loo yaqaan 'iPhone ringtone Marimba'
Michael Anthony dijo
Codka uu ninkan timaha dheer timaha wax ka badalay oo uu ku ciyaarayo halkan ayaa loo yaqaan 'Furitaanka' maya Marimba.
Jawaab Miguel Antonio
Codku waa "Furitaan"
Ma maqlo Marimbaaska. Waa codka cusub ee ka imanaya iOS 7, laakiin maahan midka caadiga ah ama kan ugu caansan. Xaqiiqdii, ma fahmin sababta ay uga saareen Marimbas midab ahaan. Isbeddel kale oo caqli-gal ah oo la yimid iOS 7 oo ka baxsan dhammaan naqshadeynta naqshadeynta cad.
Ku jawaab TR56
M @ rabshad dijo
Jawaab M @ rio
Dhagax dixeed wuxuu horey u ogolaaday Verizon, si uu uga jawaabo fariimaha ka yimid iPhone-ka
Apple wuxuu hagaajiyaa nuglaanta Siri iyo Touch ID